नयाँ उत्पादनहरु OEM कपडा फोन मा iphone मोबाइल श्रृंखला लागि मामला
IML उत्पादन विवरण र विशेषता:
सामाग्री: पीईटी फिलिम + TPU, पीसी, पीसी + ABS
IML प्रविधिको धेरै प्रकार महसुस गर्न सक्छन्, रंग एक क्रममा थप सजिलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
सबै सामाग्री बायर जर्मनी ले आयात छ।
IML प्रविधि उत्कृष्ट प्रभाव प्रतिरोध छ।
भित्र ढाँचा फोन मामला लामो समय कहिल्यै फिका राख्न सक्नुहुन्छ।
फोन मामला लागि थप प्रविधि छनोट। कपडा, छाला, बांस, काठ, फ्लैश शक्ति, आदि को लागि
OEM र ODM हामीलाई उपलब्ध छ।
IML प्रविधि निर्माता 1.10years। हामी उत्कृष्ट आर एन्ड डी विभाग छ। हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार मोल्ड बनाउन सक्छ।
खरीदार गरेको लाभ सुनिश्चित गर्न 2.More प्रतिस्पर्धी कारखाना मूल्य।
3.Professional पीडी र QA विभाग छोटो वितरण समय र उत्पादनहरु लागि गुणस्तर सख्त नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ।
पैकिंग गर्न मोल्ड बनाउने देखि 4.Complete विभाग। चरण सबै हाम्रो कारखाना द्वारा स्वतन्त्र पूरा हुनेछ।
1.High गुणस्तर: हरेक तस्वीर को सख्त डबल निरीक्षण पास हुनेछ।
2.Best वितरण समय: पूर्ण हाम्रो निर्माता द्वारा नियन्त्रण हुनेछ
3.Competitive मूल्य: सबै मूल्य आधिकारिक हुनेछ, ईन्जिनियरिङ् विभाग न्याय।
4.OEM डिजाइन: 10years अनुभव OEM र ODM निर्माता
HXS लिमिटेड, IML / आईएमडी प्रविधि निर्माण नेता!
IML के हो?
IML (मा-मोल्ड लेबल) इंजेक्शन गर्न पीईटी फिलिम मा ढाँचा मुद्रण कि नयाँ फोन मामला प्रविधि छ।
IML आईएमडी को अपग्रेड संस्करण हो (मा-मोल्ड सजावट)
हामी 10 वर्ष अनुभवको लागि IML प्रविधि ध्यान केन्द्रित गर्न पेशेवर IML निर्माता हो। , मुद्रण गर्न सजावट बनाउन, इंजेक्शन देखि, निरीक्षण, पैकिंग। चरणहरू सबै हाम्रो निर्माता द्वारा पूरा हुनेछ।
तिमी के उत्पादित गर्दै छन्?
हामी मुख्य को IML श्रृंखला उत्पादनहरु उत्पादन हो। IML फोन मामला, IML फोन प्यानल IML डिजिटल प्यानल IML स्मार्ट घडी panel.IML शक्ति बैंक प्यानल IML वाशिंग मिसिन प्यानल IML बिजुली कुकर प्यानल, आदि सहित
तपाईं OEM सेवा प्रदान गर्न सक्छन्?
हामी IML प्रविधि उद्योग मा दस वर्ष को लागि पेशेवर OEM निर्माता हो।
कृपया तपाईं को लागि मोल्ड गर्न हामीलाई साथ आफ्नो आवश्यकता डिजाइन रेखाचित्र फाइल पठाउन।
हामी कसरी नमूनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्?
हाम्रो वर्तमान नमूनाहरू हाम्रो ग्राहक र आवश्यकता मुद्रण नमूनाहरू भुक्तानी गर्न आवश्यक हुनेछ लागि निःशुल्क हुनेछ।
कसरी आफ्नो वितरण समयको बारेमा?
अर्डर लागि नमूनाहरू र 3-5days लागि 2-3days। ठूलो कार्गो आफ्नो मात्रा अनुसार हुनेछ।
Min.Order मात्रा: 3000 टुकडा / मोहरे
आपूर्ति क्षमता: 10000 प्रति दिन टुकडा
भुक्तानी नियम: टी / टी PayPal
100% ब्रान्ड नयाँ
आफ्नो फोन को लागि सही फिट
प्रभावकारी धूलो र खरोंच, shockproof विनिर्देश रोक्न
नोट: स्थापना आवश्यक छैन उपकरण, बस फोनमा स्न्याप
जहाज समर्थन छोड !! थोक ठूलो छुट समर्थन
5 टुक्रा माथि prefered छ, र बन्द धेरै5को% प्राप्त हुनेछ!
अघिल्लो: मा iphone श्रृंखला लागि नयाँ आगमन निजी मोल्ड OEM छाला फोन मामला
अर्को: आईएमडी चीन Electroplated OEM अनुकूलन फोन मामला आपूर्तिकर्ता नयाँ प्रविधि
सर्वश्रेष्ठ मोबाइल फोन प्रकरण
सेल फोन प्रकरण
चीन फोन प्रकरण 8 प्लस
कपडा फोन प्रकरण
Iml फोन प्रकरण
Iphone 8 फोन प्रकरण आपूर्तिकर्ता
Iphone फोन प्रकरण 8
Iphone8 फोन प्रकरण
ODM मोबाइल फोन प्रकरण
OEM मोबाइल फोन प्रकरण
फोन प्रकरण मा iphone 8
नयाँ आगमन निजी मोल्ड OEM छाला फोन मामला ...